Inona ny fiangonana? | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny Fiangonana, Vatan'i Kristy, no vondron'izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy sy itoeran'ny Fanahy Masina. Ny iraky ny Fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara, ny hampianatra izay rehetra nandidian'i Kristy, ny fanaovana batisa ary ny ahitra ny andian'ondry. Ho fanatanterahana izany didy izany, ny Fiangonana, tarihin'ny Fanahy Masina, dia mandray ny Baiboly ho mpitari-dalana ary tarihin'i Jesosy Kristy, lohan'ny velona. (1 Korintiana 12,13:8,9; Romana 28,19: 20; Matio 1,18: 1,22; Kolosiana; Efesiana).
Ny fiangonana toy ny fivoriana masina
«... tsy noforonina hivondronan'ny olona mitovy hevitra ihany ny fiangonana fa amin'ny fivoriambe masina [fivoriana] ...» (Barth, 1958: 136). Araka ny fomba fijery maoderina, misy miteny ny fiangonana rehefa mifanena fotoam-pivavahana sy fampianarana ny olona mitovy finoana. Na izany aza, tsy fomba fijery ara-Baiboly akory izany.
Nilaza i Kristy fa hanorina ny fiangonany ary tsy hanafotra azy io ny vavahadin'ny helo (Matio 16,16: 18). Tsy ny Fiangonan'ny olombelona izany fa ny Fiangonan'i Kristy, "ny Fiangonan'Andriamanitra velona" (1 Timoty 3,15) ary ny fiangonana eo an-toerana dia "fiangonan'i Kristy" (Romana 16,16).
Noho izany, manatanteraka tanjona masina ny fiangonana. Sitrapon'Andriamanitra ny "tsy handao ny fiangonantsika tahaka ny sasany" (Hebreo 10,25). Tsy azo atao safidy ny Fiangonana, araka ny noheverin'ny sasany; fanirian'Andriamanitra ny hiangona kristiana.
Ny teny grika ho an'ny fiangonana, izay mifanandrify amin'ny teny hebreo ho an'ny fiangonana, dia ekklesia, ary ilazana andian'olona nantsoina ho antony iray. Andriamanitra dia nandray anjara hatrany tamin'ny famoronana fiaraha-monina mpino. Ilay Andriamanitra manangona olona ao am-piangonana.
Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny teny paroasy na paroasy dia ampiasaina hilazana ireo tranon-jaza toy ny antsointsika ankehitriny (Romana 16,5; 1 Korintiana 16,19; Filipiana 2), ny tanàna an-tanàn-dehibe (Romana 16,23:2; 1,1 Korintiana 2: 1,1; Tesaloniana), vondrom-piarahamonina izay mitety faritra iray (Asan’ny Apostoly 9,31:1; 16,19 Korintiana 1,2; Galatiana), ary koa hilazana ny fiarahamonina mpino rehetra eo amin’ny tontolo fantatra.
Ny fiangonana dia midika fandraisana anjara amin'ny fiarahamonina Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny kristiana dia eo amin'ny fiaraha-monina an'ny zanany lahy (1 Korintiana 1,9), ny Fanahy Masina (Filipiana 2,1) miaraka amin'ny rainy (1 Jaona 1,3) nantsoina ka rehefa mandeha amin'ny fahazavan'i Kristy isika dia "mihavana" (1 Jaona 1,7).
Ireo izay manaiky an'i Kristy dia mitandrina "hitazona ny firaisana am-po amin'ny alàlan'ny fatoran'ny fiadanana" (Efesiana 4,3). Na dia misy fahasamihafana eo amin'ny mpino, ny fiarahan'izy ireo dia mahery vaika noho ny tsy fitoviana. Ity hafatra ity dia hamafisin'ny iray amin'ireo fanoharana manan-danja ampiasaina amin'ny fiangonana: fa ny fiangonana dia "vatan'i Kristy". (Romana 12,5; 1 Korintiana 10,16; 12,17; Efesiana 3,6; 5,30; Kolosiana 1,18).
Ny mpianatra tany am-boalohany dia avy amin'ny fiaviana samihafa ary tsy azo inoana fa voataona ho mpiray finoana. Antsoin'Andriamanitra ho mpiray finoana amin'ny lafiny ara-panahy ny mpino.
Ny mpino dia "mpikambana" ao anatin'ny vondron'izao tontolo izao na amin'ny ankapobeny (1 Korintiana 12,27:12,5; Romana), ary io maha-olona antsika io dia tsy tokony hanohintohina ny firaisan-tsaintsika, satria "isika rehetra dia natao batisa iray amin'ny vatana iray" (1 Korintiana 12,13).
Ny mpankatò mankatò anefa, dia tsy miteraka fisaraham-bazana amin'ny alàlan'ny tsikombakomba ary manamafy ny fomba fijeriny; fa kosa, dia manome lanja ny mpikambana tsirairay izy ireo ka "tsy misy fizarazarana amin'ny tena" fa ny "samy miara-mihetsika amin'ny zavatra mitovy ireo mpikambana" (1 Korintiana 12,25).
"Ny Fiangonana dia ... fikambanana izay mizara ny fiainana mitovy - ny fiainan'i Kristy (Jinkins 2001: 219).
Nampitahain'i Paoly koa ny "trano fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy". Nilaza izy fa “mifamatotra” ny mpino ao anaty trano iray izay "mitombo ho an'ny tempoly masina ao amin'ny Tompo" (Efesiana 2,19: 22). Ao amin'ny 1 Korintiana 3,16:2 sy ny 6,16 Korintiana dia niresaka koa izy fa ny fiangonana dia tempolin'Andriamanitra. Torak'izany koa i Petera dia mampitaha ny Fiangonana amin'ny "trano ara-panahy" izay anaovan'ireo mpino ho "fisoronana mpanjaka, olona masina". (1 Petera 2,5.9) .Ny fianakaviana dia toy ny fanoharana ho an'ny fiangonana
Hatrany am-piandohana, matetika dia voaresaka sy niasa toy ny fianakaviana ara-panahy ny fiangonana. Ny mpino dia antsoina hoe "mpirahalahy" ary "rahavavy" (Romana 16,1: 1; 7,15 Korintiana 1:5,1; 2 Timoty 2,15; Jakoba).
Mampisaraka antsika amin'ny fikasan'Andriamanitra ho antsika ny ota, ary ny tenantsika tsirairay avy eo amin'ny lafiny ara-panahy dia lasa manirery sy tsy manan-dray. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny "hitondra ny trano irery" (Salamo 68,7) mba hampitana ireo olona tafasaraka ara-panahy ao amin'ny fiangonan'ny Fiangonana, izany hoe "ankohonan'Andriamanitra." (Efesiana 2,19).
Ao amin'ity «fianakaviana [fianakaviana] amin'ny finoana (Galatiana 6,10), ny mpino dia afaka mamelona ao anaty tontolo milamina ary miova ho sarin'i Kristy noho ny Fiangonana, izay mifandraika amin'i Jerosalema (Tanànan'ny fandriam-pahalemana) izay no ao (jereo koa Apokalypsy 21,10), "reny daholo isika" (Galatiana 4,26).
Ilay ampakarin'i Kristy
Sary ara-baiboly mahafinaritra iray dia miresaka ny Fiangonana amin'ny maha-ampakarin'i Kristy. Ireo tandindona amin'ny soratra masina isan-karazany, ao anatin'izany ny Tonon-kira. Andininy iray lehibe dia ny Tonon-kiran'ny 2,10: 16, izay ilazan'ny olon-tiany fa efa tapitra ny fotoanan'ny ririnina ary izao dia tonga ny fotoana hihira sy fifaliana. (jereo koa ny Hebreo 2,12), ary ao koa izay lazain'ilay ampakarina hoe: "ny sakaizako dia azy" (Md 2,16). Ny Fiangonana dia samy manana ny maha-izy azy ary miaraka amin'i Kristy ary izy dia mpikamban'ny Fiangonana.
I Kristy no mpanambady izay "tia ny Fiangonana sy nanolotra ny tenany ho azy" ka dia "fiangonana be voninahitra ary tsy misy pentimpentina na kapoka na zavatra hafa toy izany" (Efesiana 5,27). Io fifandraisana io, hoy i Paul, dia "tsiambaratelo lehibe izany saingy ampianariko an'i Kristy sy ny fiangonana" (Efesiana 5,32).
Jaona dia mandray an'io lohahevitra io ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. Ilay Kristy nandresy, ilay Zanak'ondrin 'Andriamanitra dia nanambady ny ampakarina, ny fiangonana (Apokalypsy 19,6: 9-21,9; 10), ary miaraka izy ireo dia manambara ny tenin'ny fiainana (Apokalypsy 21,17).
Misy metafora sy sary fanampiny ampiasaina momba ny fiangonana. Ny Fiangonana no andiany izay mila mpiandry be fiahiana izay mikarakara azy ireo miaraka amin'ny anjaran'i Kristy (1 Petera 5,1: 4); dia saha izay ilain'ny mpiasa mamboly sy manondraka (1 Korintiana 3,6: 9); ny fiangonana sy ny mpikambana ao aminy dia toy ny voaloboky ny voaloboka (Jaona 15,5); tahaka ny hazo oliva ny fiangonana (Romana 11,17-24).
Ho taratry ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sy ho avy, ny fiangonana dia toy ny voan-tsinapy izay maniry ho hazo iray izay ahitan'ny voro-manidina (Lioka 13,18: 19); ary tahaka ny masirasira izay mahatonga ny maloto amin'izao tontolo izao (Lioka 13,21), sns. Ny Fiangonana amin'ny maha-Iraka azy
Hatrany am-boalohany dia niantso olona sasany Andriamanitra hanao ny asany eto an-tany. Nandefa an'i Abrahama sy i Mosesy ary ny mpaminany Izy. Nandefa an'i Jaona Mpanao Batisa Izy hanomana ny lalana ho an'i Jesosy Kristy. Avy eo dia nirahiny Kristy ho famonjena antsika. Naniraka ny Fanahy Masiny ihany koa izy hanangana ny fiangonany ho fitaovana ho an'ny filazantsara. Ny Fiangonana koa dia alefa any amin'izao tontolo izao. Ity asan'ny filazantsara ity dia fototra ary mahatanteraka ny tenin'i Kristy izay nanirahany ny mpanara-dia azy ho eo amin'izao tontolo izao hanohy ny asa efa natombok'izy ireo (Jaona 17,18-21). Izany no dikan'ny «iraka»: hirahin'Andrimanitra hanatanteraka ny tanjony.
Ny fiangonana iray dia tsy mifarana ao anatiny ary tsy tokony ho azy irery ihany. Azo jerena ao amin'ny Testamenta Vaovao, ao amin'ny Asa. Nandritra ny boky dia nitombo ny asa fampielezana ny filazantsara tamin'ny alàlan'ny fitoriana sy fananganana fiangonana (Asan’ny Apostoly 6,7: 9,31; 14,21:18,1; 11:1; 3,6; Korintiana sns).
Paul dia manondro fiangonana sy kristiana manokana izay mandray anjara amin'ny "Community of the Gospel" (Filipiana 1,5). Miady aminy ianao amin'ny filazantsara (Efesiana 4,3).
Ny fiangonana tao Antiokia no nanirahan'i Paoly sy Barnabasy tamin'ny diany misionera (Asan’ny Apostoly 13,1: 3).
«Ny fiangonana tao Tesalonika« nanjary maodely ho an'ny mpino rehetra any Makedonia sy Achaja ». Avy tamin'izy ireo "ny tenin'ny Tompo dia tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa tamin'ny toerana hafa rehetra". Mihoatra ny fetrany ny finoany an'Andriamanitra (2 Tesaloniana 1,7: 8).
Nanoratra i Paoly fa tokony hahalala ny fitondran-tena “ao an-tranon'Andriamanitra i Timoty, izany hoe fiangonan'Andriamanitra velona, ​​andry ary fototry ny fahamarinana” (1 Timoty 3,15).
Indraindray ny olona dia afaka mahatsapa fa ny fahatakarany ny fahamarinana dia manan-kery kokoa noho ny fahatakaran'ny fiangonana izay azony avy amin'Andriamanitra. Mety hitranga ve izany raha mahatadidy isika fa ny Fiangonana no "fototry ny fahamarinana"? Fiangonana no ametrahana ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fampianarana ny teny (Jaona 17,17).
Taratry ny "fahafenoana" an'i Jesosy Kristy, lohany velona, ​​"izay manatanteraka ny zavatra rehetra amin'ny rehetra" (Efesiana 1,22: 23), ny Church of the New Testament dia mandray anjara amin'ny asa fanompoana (Asan'ny Apostoly 6,1: 6-1,17; Jakoba, sns.) Ho amin'ny fiarahana (Asan’ny Apostoly 2,44: 45-12; Jodasy, sns.), Amin'ny fanatanterahana ny baikon'ny fiangonana (Asan 'ny 2,41; 18,8; 22,16; 1 Korintiana 10,16-17; 11,26) sy ny fitsaohana (Asan’ny Apostoly 2,46: 47-4,16; Kolosiana, sns).
Nandray anjara tamin'ny fanampiana ny fiangonana, ohatra, ny fanampiana nomena ny fiangonana any Jerosalema amin'ny fotoan'ny tsy fahampian-tsakafo (1 Korintiana 16,1: 3). Ny fandinihana akaiky ny taratasin'ny apostoly Paoly dia mampiseho fa ireo fiangonana dia nifandray ary nifandray. Tsy nisy fiangonana nanirery.
Ny fandinihana ny fiainana any am-piangonana ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manambara endrika iray amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiangonana amin'ny fahefan'ny fiangonana. Ny fiangonana tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny fahefan'ny fiangonana eo ivelan'ny toerany na ny fitantanana azy. Azo jerena fa ny fiangonana New Testament dia vondron'ireo fiangonana eo an-toerana izay nitambatra tamin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra iraisana ho an'ny fomban'ny finoana an'i Kristy nampianarin'ny apôstôly. (2 Tesaloniana 3,6: 2; 4,13 Korintiana).
Ny Fiangonana dia vatan'i Kristy ary an'izay rehetra eken'Andriamanitra ho mpikambana ao amin'ny "Fiangonan'ny Olomasina" (1 Korintiana 14,33). Zava-dehibe izany ho an'ny mpino satria ny fandraisana anjaran'ny vondron'olona dia fomba ahafahan'ny Ray miaro antsika sy manohana antsika mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy.